Ndedzipi nzira dzinogona kushandiswa kumaka kuvaka?
Abstract: Mutsara upamhi hwe ruoko-Push mhando yekumaka muchina inotemwa nehupamhi hwe hopper, iyo inowanzo kuve 100mm, 150mm, 200mm. Kupfeka kunopisa kunopisa kunoda kudziirwa kusvika pakati pe 180-230 degrees Celsius kuti ishandise. Maitiro ekumaka kuvaka anogona kunge akapatsanurwa kuita echinyorwa m ...
Ndezvipi zvakanakira yakakwira-kumanikidza mvura jeti yekumaka kubviswa?
Parizvino, apo mucherechedzo wepamusoro-wekumanikidza mvura nenyunje muchina wabviswa, nekuti mamwe mashandiro zvakare ane akakwirira uye akakwirira ekudzivirira kwezvakatipoteredza, iyo yakanyanya-yekumanikidza mvura jeti yekumaka kubvisa nzira yakabuda panguva yenhoroondo, uye yave mhando yekumaka kuti ...
Michina yekumaka mumugwagwa inosarudzwa sei?
Kaviri-boka nzira yekumaka muchina: Maviri-echinhu ekumaka chiratidzo chepamusoro-magumo akagadzirwa mumakore apfuura. Izvo zvakasiyana neanopisa-melt yekumaka uye yakajairwa-tembiricha yekumaka nekuda kwetembiricha kudonha kana solvent (yemvura-yakavakirwa) volatilization uye dzimwe nzira dzekuomesa dzemuviri kuti dzigadzire kupfeka firimu ....
Ndezvipi zvinhu zvikuru zvechigadzirwa zvemuchina wekumaka?
Chigadzirwa maficha emuchina wekumaka: Iyo yepamusoro-inoshanda uye hombe-kuyerera S7000 inogona kubatanidza zvakananga pfuti mbiri kuti dzishande panguva imwe chete, iyo inovandudza zvakanyanya kushanda kwebasa uye inotsigira kushandiswa kwemahombe-saizi mageji. Simba: Kuyerera kweiyo 5.8 l / min kunoita SF7000 nenzira kwayo kuve th ...
Ndezvipi zvishandiso zvinogona kushandiswa pakushambidza kukuru kwekucheresa mutsetse kuchenesa？
Kumaka kuchenesa kwenzira yekumaka yekubvisa michina hakungoderedze kumanikidzwa kwemvura chete, nekuti iyo jeti remvura ine simba rakanyanya uye simba rekucheka, bhanhire rakakura rekuchenesa rabuda. Green kuvaka iri nyore. Iyo yese nzira yemugwagwa inozove yakanyanya kuchena ...
Chii chekuteerera kana uchichenesa mamaki emugwagwa
Kuchenesa kweMark kunogona kudzivirira bhuni remuchina. Iyo inorema zvirinani, kuvakwa pane iyo micro-pamusoro yesitiroko, inofambira mberi nzira inozvifambisa payo pasimende asphalt pavement, mugwagwa mukuru pabhiriji dhizaini, zambuko kudzedzereka, nzira yegayo yekugaya mukuchenesa kwetambo dzekumaka, hwokugaya hweta ...
Ndezvipi zvinhu zvinoshandiswa kumaka kubvisa?
Iyo yakamisikidzwa mutsetse kubvisa magnetite firita zvinhu zvinowedzera kupfeka kuramba ne 20 ~ 35% zvichienzaniswa neyakajairwa magnetite firita zvinhu. Inogona kureva kune yakabudirira ruzivo mumunda, kusanganisira kutsvagisa nekusimudzira kweatatu-masara firita midhiya firita, iyo firita mubhedha we ...
/ Maitiro ekugadzirisa iyo yekumaka muchina mushure mekukanganisa?
Muchina wekumaka unotanga waisa iyo thixotropic pendi inobvisa munzira yekumaka kuti ibviswe kuti inyatsobata nependi yemugwagwa kuti ibviswe. Pasi pechiito chekubvisa pendi, pendi yemumugwagwa inopinda, kuzvimba, uye kuzvimba mukati memaminetsi maviri kusvika gumi. Kuchinja kwemuviri uye kwemakemikari akadaro ...
Ndeipi mhedzisiro yeiyo yepamusoro-yekumhanyisa njanji bhokisi danda reruoko rwekutanga kusunda mhando chisel?
Iyo danda pamusoro peiyo yepamusoro-yekumhanyisa njanji bhokisi danda (rakagadzirwa danda) rekutanga-ruoko kusunda mhando vhudzi rekucheka muchina rakarongedzwa nekusavhara kwemvura. Kongiri chiseling parutivi bhiriji, zambuko magumo kumeso, danda divi, danda magumo kumeso. Bvisa kupfeka kwepasi, pendi, uye dzakasiyana traffic traffic ...